MUUQAAL: Wiil Soomaaliyeed oo lagu Toogtay Canada & Hooyadiis oo Naxdin Darteed dhulka laga soo qaaday - Hablaha Media Network
MUUQAAL: Wiil Soomaaliyeed oo lagu Toogtay Canada & Hooyadiis oo Naxdin Darteed dhulka laga soo qaaday
HMN:- Wiil Soomaaliyeed ayaa lagu toogtay magaalada Toronto ee dalka Canada waxaana arinkaan si weyn uga naxay qooyskiisa gaar ahaan Hooyadiis oo naxdin darteed dhulka laga soo qaaday .
Wiilkaan ayaa ka mid ahaa Ardayda ugu fir fircoon jaamacada Toronto wuxuuna sidoo kale ciyaari jiray Kubada Koleyga ama Basketball-ka . Jaaliyada Soomaaliyeed iyo Culumada Masaajidka Soomaalida ayaa si ah u dhaliilay Wiilkaan dhaliyarada ah ee la dilay .
Ma ahan markii ugu horeeysay oo muwaadin Soomaaliyeed lagu dilo dalka Canada waxaana iminka kiiska baartitaankiisa gacanta ku haya booliiska dalka Canada . Dilka wiilkaan ayaa kaga duwan dilalkii hore ma uusan qof ama ruux arimo balwad loo dilay balse wuxuu ahaa Arday si aad ah ugu wanaagsan Jaamacadiisa .